Izicucu Zowesifazane - Zampaloni Genova
Indlunkulu Via Galata
UMsombuluko Half Half:
NgoLwesithathu, uLwesine kanye noLwesihlanu:
Ndlunkulu Via S. Giovanni Battista
Kuvaliwe: NgoLwesithathu ekuseni
Ukuze ube muhle kusuka ezinyaweni kuya ekhanda
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-15)
I-Calzature ngayinye uomo e donna a IGenoa: UZampaloni kuyisitolo nhlobo isikhafu waziwa kuzwelonke. Ukusebenzisana produzione e ibhizinisi di izicathulo kuso sonke isitayela nezidingo, futhi kukhuthaza ukukhethwa kwe izingubo esitolo se I-Recco.
Izicucu zezinyawo zabesilisa nabesifazane: IZampaloni ifanela izicathulo ezinkulungwane zamakhasimende eGenoa nasemhlabeni jikelele
Thenga izicathulo ngayinye uomo o donna e izitolo kwesokudla, kwenza umehluko. The isikhafu yilezi izesekeli ethandwa kakhulu ngumkhathi wabesifazane: ukuyenga i ukuhamba of a donna futhi ukubenza bakhululeke ngenkathi behamba amakhilomitha namakhilomitha. Zampaloni, a IGenoa ibhizinisi eliqhutshwa ngumndeni elikhuthaza iminyaka eminingi yolwazi embonini izicathulo. Kusuka enkabeni ye produzione yasungulwa ngo 70s at yokukhiqiza esifundeni yimuphi UMarche, lapho kuvulwa izitolo ezimbili ezinhle, Zampaloni bekulokhu kuyinkomba yezethenjwa kubahlali kanye nezivakashi.
EGenoa, izicathulo zezinyawo zabesifazane nezamadoda ngazo zonke izitayela: I-Zampaloni ihlala inezicathulo ezifanele kuwo wonke umuntu
ITrovare izicathulo ngayinye uomo o donna ezokwanelisa ikhasimende ngama-degree angama-360 alikaze lithathwe kalula. Zampaloni uyazi kahle, futhi ngenxa yalesi sizathu abasebenzi bakhe bakhiqiza futhi bathengisa amamodeli kuphela isikhafu nemfashini futhi ikhululekile. Eminyakeni yama-70s, Walter kwethulwa ezimbili isitolo: eyodwa enkabeni ye ngeXX Settembre, nomunye ngokuhamba kwe URiviera di Levante, a I-Recco. Kusukela lapho, kwabesilisa nabesifazane, i Isicathu seZampaloni, a Genoa, sekuyisiqinisekiso sekhwalithi nenduduzo.
Imigqa yezicathula zezinyawo kukho konke ukunambitheka: ama-sneaker, amaphampu, amabhuzu nokuthi yiziphi izinyawo ezinhle kakhulu ezinyathela zakho
Isitolo se Izicathu zeZampaloni kuyaziwa edolobheni ngokunqunyelwa kwawo okukhulu kwe isikhafu imfashini yakamuva, evela Amagugu eDiadora kuma-classics Hogan. kusukela isikhafu i-coi izithende agli amasinki, Woza i-amphibia ai izimbadada, kuze kube wedges ne-ai othandi: wonke amamodeli alandela ukuthambekela okwamanje. Isabella e Walter bazokuqondisa ekukhetheni okubanzi kwemikhiqizo edumile ye izicathulo nezinsimbi, kanye ne- umugqa wokuphathelene di izicathulo ngayinye uomo e donna Zampaloni. Siphinde futhi singabathengisi abasemthethweni bemikhiqizo elandelayo: IPreata, iPànchic, iNeroGiardini, iSaucony, iGant, iPeuterey e I-Sun68.
Ukugqoka isicucu esifanele kuletha izinzuzo zangemuva, kepha futhi kuqinisa isisa
I-Per Zampaloni, a IGenoa ukunakekelwa kwe ukuhamba yamakhasimende yinto ebaluleke kakhulu. Lesi sibopho namakhasimende yilokho okuphembelela ukukhetha kwethu kochwepheshe futhi kusivumela ukuba semakethe yomhlaba wonke izicathulo amashumishumi eminyaka. TO I-Recco uzothola nesigaba esizinikezelweizingubo, Ngaphezu kwe izicathulo. Ezitolo zethu, abasebenzi abasizayo nabanekhono bazokwamukela, bazi njalo ukuthi yini ongayenza ukuhamba -nganqandeki. Siyingxenye ye Club di I-TrovaWeb, ukubonga kwendawo okwenzelwe kuyo ongathola okunikezwayo ngesikhathi sangempela.
Ikheli: I-Via Galata, 23 R (Izicathulo)
Isihlalo 2: I-Via S.Giovanni Battista, 9 (Izingubo - Izicathulo)
Idolobha: IGenoa Recco
I-POSTAL CODE: 16121 - 16036
Ucingo: 010 561615 (indlunkulu yeVia Galata)
Ucingo: 018 575746 (Ndlunkulu Via S. Giovanni Battista)
Iwebhusayithi: www., ubalaklu.lug
Inombolo ye-VAT: 01548450996